Somaliland maxay ku faleysaa Midnimo? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Somaliland maxay ku faleysaa Midnimo?
Qof kastaa wuxuu ka qalin jebiyay Iskuulkaas furan ee ku saabsan wixii la soo maray iyo waxa hadda la hasto ee aan la heleen haddii Soomaaliya laga sii tirsanaado. Aqoontaas barashadeeda ma jirto meel ka caagga. Waxaa lagu bartaa xafladaha, xafiisyada, goobaha ganacsiga, guryaha iyo saxaafadda bulshada, waxaana laga dhegeystaa Raadiyaha iyo TV-ga.
Previous articleCiyaartooy hore oo ka war Bixiyey waayahiisa Hore
Next articleMadaxwayne #Farmajo iyo hadaladisii manta
Madaxweynahii Hore oo shacabka Soomaliyeed ugu hambaleeyey 60 26 Juun maalinta...